Bartomeu oo markale weeraray Laporta iyo dagaalkii afka ah ee madaxweynihii hore ee Barcelona kala dhexeeyay midka haatan oo soo laabtay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Bartomeu oo markale weeraray Laporta iyo dagaalkii afka ah ee madaxweynihii hore ee Barcelona kala dhexeeyay midka haatan oo soo laabtay
October 14, 2021 at 09:28 Bartomeu oo markale weeraray Laporta iyo dagaalkii afka ah ee madaxweynihii hore ee Barcelona kala dhexeeyay midka haatan oo soo laabtay2021-10-14T09:28:27+02:00 CAYAARAHA
(Barcelona) 14 Okt 2021. Dagaalka afka ah ee ka dhexeeya madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta iyo midkii ka horreeyay ee Josep Maria Bartomeu ayaa waji kale yeeshay iyadoo labadooduba midba midka kale ku dhaliilayo xaaladda liidata ay naadigu dhex dabaallaneyso.
Laporta iyo maamulka la shaqeeya ayaa marwalba ku eedeeya xukunkii iyaga kahorreeyay inuu ka masuul yahay xaaladda dhaqaale xumo ee Barca la tacaalleyso hase ahaatee, Bartomeu ayaa xog uu soo saaray isku difaacay kuna weeraray xukunka haatan.
“Kooxdu waxay khasaartay ugu yaraan 330 milyan oo euro oo ah dakhliga 2020-21 iyadoo uu u sabab yahay xanuunka faafa” ayuu u dhignaa bayaankii madaxweynihii hore ee Barcelona.
Qoraalkiisa waxa uu sii raaciyay in maamulka haatan u taliya Blaugrana uu masuul ka yahay khasaarahan maaliyadeed isla markaasna aysan u furneyn inay kooxda sii hoggaamiyaan illaa ay ku sigato in la xaraasho.
Marka laga soo tago dagaalka labada nin iyo dhaqaale xummida kooxda heysato, Barcelona ayaa la tacaaleysa natiijo xumo iyo qaab ciyaareed liita oo dhanka garoonka ah iyadoo kaliya hal guul gaartay lixdii ciyaar ee ugu dambeysay tartammada oo dhan taasoo xitaa shaki weyn gelisay mustaqbalka Macallin Ronald Koeman.
« Sergio Ramos safashadiisii ugu horreysay ee PSG oo uu dib u dhac kale ku yimid… (Maxay tahay sababta?)
Drogba oo markale qaraw ku riday Macallin Wenger kaddib markii uu xalay saddexley ka dhaliyay… (Ciyaar ay ka qayb ahaayeen Pires, Flamini, Nasri iyo xiddigo kale) »